Umvelisi we China Flange kunye noMthengisi | I-Kingmetal
Flanges -Ingcaciso ngokubanzi
Le flange ijikelezwe ngenkqubo yentsimbi entanyeni oko kuthetha ukuba ingqibelelo yentsimbi ene-welding inokuvavanywa ngokulula ngemitha. Izitena zombhobho wombhobho kunye nomdlalo we-flange, ocutha isiphithiphithi kunye nokhukuliseko lomhlaba ngaphakathi kombhobho. Intamo ye-weld ke iyathandwa kwizicelo ezibalulekileyo
Le flange ityibilika ngaphezulu kombhobho emva koko yangena nge welding.
Le flange isetyenziselwa ukuvala imibhobho, iivevhe kunye neempompo, inokusetyenziswa njengesigqubuthelo sokuhlola. Ngamanye amaxesha kubhekiswa kuye njenge-flange engenanto.
Le flange iyabalwa idikiwe ukuba yamkele umbhobho ngaphambi kokuba ifakwe i-fillet welding.I-bore ye-pipe kunye ne-flange ye-flange zombini zifana neempawu zokuhamba kakuhle.
Le flange kubhekiswa kuyo njengomsonto okanye isikrufu. Isetyenziselwa ukudibanisa ezinye izinto ezinomsonto kuxinzelelo olusezantsi, usetyenziso olungabalulekanga. Akukho welding iyafuneka.
Ezi flanges zihlala zisetyenziswa kunye nesiphelo se-stub esidityaniswe ngombhobho nge-flange evulekileyo emva kwayo. Oku kuthetha ukuba isiphelo sesiphelo sihlala sisenza ubuso. Ukudityaniswa kwamathanga kuyathandwa kwizicelo zoxinzelelo olusezantsi kuba idityaniswe ngokulula kwaye ilungelelaniswe. Ukunciphisa iindleko, ezi flanges zinokubonelelwa ngaphandle kwehabhu kunye / okanye kunyango oluphathwayo lwentsimbi.
Uhlobo lweRingi oluDibeneyo
Le yindlela yokuqinisekisa ukuba uqhagamshelo lwesibhengezo esivuzayo kuxinzelelo olukhulu. Isangqa sentsimbi sicinezelwe kwindawo enamacala amathandathu ebusweni kwiflange ukwenza itywina. Le ndlela yokudibanisa inokuqeshwa kwi-Weld Neck, Slip-on nakwi-Blind Flanges.
Esisangqa I-WeldingNeck, iSlipon, iMfama, i-Plate, i-ThreadedFlange, iSocketWeldFlange
Umgangatho I-ANSI I-ANSIB16.5, ASMEB16.47seriesA (MSS-SP-44), ASME
B16.47, uthothoB (API605)
BS I-BS4504, i-BS10TableD / E.
GOST IGOST12820-80, GOST12821-80
I-UNI UNI2280-UNI2286, UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095
Izinto eziphathekayo I-ANSI I-CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
EN Inkcazo: CSRST37.2,5235JR, P245GH, C22.8, SS304 / 304L, 316 / 316L
Uxinzelelo I-ANSI Iklasi150,300,400,600,900,1500,2500lbs
Ubungakanani I-ANSI 1/2 * -120 "
Ukwaleka I-anti-rustoil, i-varnish, i-yellowpaint, i-blackpaint, i-galvanizingetc
Ukusetyenziswa Ukudityaniswa kwendibaniselwano yonke into,
umphunga, umoya, gasandoil
Iphakheji Iiplanga / iipellethi
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weCarbon Steel Weld Caps
Okulandelayo: Isefu oluthambileyo kwesinyithi oluthambileyo umbhobho efanelekileyo lokulinganisa amashishini